Nepal - [झटारो] साढे सात सय सरकारको जय !
दुई तिहाइको केन्द्रीय सरकारले काम गर्न थालेको ६ महिना र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले काम गर्न थालेको १२ महिना कटेछ । उबेला यी सरकार सञ्चालकहरुका डरलाग्दा घोषणा सुनेर हामी निकै आतंकित थियौँ । आतंकमा पारेर उनीहरुले हाम्रो भोट लगे र चुनाव जिते । तलदेखि माथिसम्म एउटै पार्टीको बहुमतका सरकारहरु बनेपछि अब राम्ररी सास फेर्न नपाइने भयो भन्ने चिन्ताले हाम्रो आधा मासु भएको थियो । वामपन्थी–क्रान्तिकारीका सरकारहरुले केही महिनामै देशको अनुहार चिन्नै नसक्ने बनाइदेलान् भन्ने डर थियो हामीलाई । सडक बन्ला, खाडलहरु पुरिएलान्, धूलो हट्ला, हरियाली छाउला, भ्रष्टाचार समाप्त होला, विकास निर्माणका कामहरु रातारात हुन थाल्लान्, हत्या–हिंसा र बलात्कारका घटना निमिट्यान्न होलान् अनि हामी त्यस्तो पराई भूमिमा कसरी बाँचौँला भन्ने भयले थुरथुर भएका थियौँ ।
सहरमा धूलो उड्न छाड्छ भनेको सुन्दा हाम्रो कलेजोले काम गर्न छाड्लाजस्तो भाथ्यो । सडकमा खाल्डा एउटा पनि देखिने छैनन् भनेको सुनेर हाम्रा हाड–करङ दु:खी भएका थिए । खोलानाला सफा हुन्छन्, फोहोरमैला देख्न पाइँदैन भनेर आँखाको आँसु नै सुक्न लागेको थियो । दुर्गन्ध समाप्त होला भनेर हाम्रो फोक्सो फुस्रो भएको थियो । तर, हामीलाई पीडा हुने त्यस्ता कुनै अप्रिय दुष्कर्म हाम्रा सरकारहरुले गरेनन् । बरु उल्टै हाम्रा नगर–महानगरहरुमा विगत वर्षभन्दा चालीस प्रतिशतले खाडलहरु वृद्धि भई हाम्रा हाड–करङले सोही अनुपातमा बढी हल्लिन पाएको तथ्यांक आयो । हाम्रो फोक्सोले विगत वर्षभन्दा २५ प्रतिशत बढी धूलो–धूवाँ खान पाएर रमायो । फोहरका पहाड यथावत देखिरहन पाउँदा हाम्रा आँखामा खुसीका आँसु डबडबाए । राजधानीका असारे खेतजस्ता गल्लीहरु देखेर हामी मात्र होइन, विदेशी पर्यटकहरुले पनि भरपूर आनन्द उठाए ।
विदेशी पर्यटकको कुरा गर्दा उनीहरु हाम्रो राजधानीमा भुस्याहा कुकुरको बिगबिगी देखेर पनि साह्रै आनन्दित हुन्छन् रे ! खुसीको कुरा अहिले भुस्याहा कुकुरको संख्या स्थानीय निर्वाचनअघिको भन्दा चार गुणा बढेको तथ्यांक छ । गोरु र साँढेहरुको संख्या पनि अभूतपूर्व रुपमा वृद्धि भएको छ । यत्रतत्र आहालको व्यवस्था भएकाले भैँसी, राँगा र सुँगुरका लागि पनि एकदमै अनुकूल वातावरण बनेको छ । हामीले काठमाडौँ महानगरलाई छिट्टै खुला चिडियाखाना घोषणा गरेर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनमा फड्को मार्ने सम्भावना छ ।
सामाजिक आतंकको पुनरागमनले पनि हामी थप आश्वस्त भएका छौँ । हत्या र बलात्कारका घटना बढ्दैछन् । जुलुस, तोडफोड, आगजनी, हवाई फायर, गोली र सहिद घोषणा इत्यादिका न्यास्रा पनि मेटिँदैछन्। दलालहरुको शिर ठडिएकै छ, ठेकेदारहरुको दादागिरी कायमै छ, व्यापारी–व्यवसायीहरुको मनपरी घटेको छैन । हामीले सुख, शान्ति, स्थिरता, सुरक्षा, प्रगति, विकासका पीडा भोग्नु नपर्ला नै जस्तो हुँदैछ । जेहोस्, उहिल्यैदेखि बानी परेको हाम्रो मन र शरीरलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी सरकारहरुले केही नगर्दा हामीलाई सुक्न लागेको बिरुवामा पानी हालेजस्तै भएको छ । हामी नेपालीको भाग्य, हामीले विगतमा जस्तै यथावत रुपमा सास फेर्न पाएका छौँ । जति तिहाइको सरकार बने पनि नेपाल नेपालै रहलाजस्तो छ, नेपाली नेपाली नै रहुँलाजस्तो छ । धन्य छन्, हाम्रा तीनै तहका साढे सात सय सरकारहरु !